Anime 10ka Jacayl ee Ugu Fiican Si Aad U Daawato Roll Crawchy - Cradle View
Jacaylka Jacaylka ah ee lagu daawado Crunchyroll
Leave a Comment on Top 10 Jacayl Anime Si Aad U Daawato On Roll Crunchy
Roll Crunchy wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo Anime ah oo ka kooban dhammaan noocyada kala duwan. Kuwaas waxaa sidoo kale ku jira anime jacaylkeena jacaylka oo qaar badan oo ka mid ah ayaa laga heli karaa Duub Crunchy. Marka maqaalkan, waxaan ku dhex mari doonnaa xulashooyinkayaga ugu sarreeya ee loogu talagalay Top 10 Romance Anime si aan uga daawado adeegga qulqulka Duub Crunchy. Fadlan la soco inay kuwani yihiin fikrad iyaga u gaar ah iyo in bandhigyada qaar laga yaabo inaan la heli karin.
10. Nolosha Centaur
Nolosha Centaur - Crunchyroll - Top 10 Jacayl Anime Si Aad U Daawato Crunchyroll
Soo koobida Anime:
Kimihara Himeno, oo sidoo kale loo yaqaan "Hime," waxay ku socotaa nolosheeda, jacaylkeeda, iyo waxbarashadeeda sida gabdhaha caadiga ah ee dugsiga sare. Waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin ayaa ah iyada boqolley. Waxay ku raaxeysataa nolosheeda iskuulka oo ay weheliso asxaabteeda fasalada oo leh qaabab badan oo u gaar ah, oo ay ku jiraan Nozomi draconid, Kyoko riyaha ardaaga, wakiilka fasalka angelfolk, iyo Sassas-chan Antarctican. Ina Hime adeerkeed Shino-chan, saaxiibkeed Maki-chan, iyo afarta gabdhood ee walaalaha ah ee matalaya fasalka ayaa sidoo kale ku biiraya jilayaasha sheekadan quruxda badan ee nolosha ee ku saabsan gabdhaha aadanaha, laakiin aan ahayn!
Waxaad ka daawan kartaa nolosha A Centaur: https://www.crunchyroll.com/a-centaurs-life
Haddii aadan hubin wax ku saabsan Anime-kan waxaad ka akhrisan kartaa dib u eegista halkan: https://www.crunchyroll.com/a-centaurs-life/reviews
Roll Crunchy Juunyo 2, 2021 Qiimeynta:
9. Ao-chan Ma baran Karaa!
Ao-chan ma baran karaa! - Crunchyroll - Top 10 Jacayl Anime Si Aad U Daawato Crunchyroll
Ao Horie aabihiis, oo ah qoraa khayaali qaawan, ayaa doortay magaca Ao maxaa yeelay A wuxuu u taagan yahay "tufaax" iyo O wuxuu u taagan yahay "orgy"! Ao waxay rabtaa inay ka baxsato dhaxalka aabaheed oo ay gasho jaamacad caan ah, Ao waxay diirada saareysaa iskuulka halkii ay ka sii wadi laheyd jacaylka. Waqti uma haysato wiilasha, laakiin hal dhibaato oo keliya ayaa jirta: Kijima, oo ay isku fasal wanaagsan yihiin, ayaa uun u qiratay jacaylkiisa iyada! Iyo inay kasii darto, ma joojin karto inay ka fikirto fikradaha wasakhda ah ee isaga ku saabsan! Waxay umuuqataa inay ka baxsaneyso saameynta aabaheed inay adkaan doonto.
Waxaad ka daawan kartaa Ao-chan Ma baran karo halkan: https://www.crunchyroll.com/ao-chan-cant-study
Waxaad ka akhrisan kartaa dib u eegista Ao-chan Ma Daraaseyn Karto halkan: https://www.crunchyroll.com/ao-chan-cant-study/reviews
Qiimeynta: 4.5 5 XNUMX.
8. Daalimkeyga Macaan
My daalim macaan - Crunchyroll - Top 10 Jacayl Anime Si Aad U Daawato Crunchyroll
Saaxiibbada carruurnimada Akkun iyo Nontan waa saaxiib iyo saaxiib. Laakiin Akkun wuxuu had iyo jeer u sheegaa waxyaabo qosol leh oo qosol leh Nontan iyo waliba inuu la qabowsan yahay oo had iyo jeer waa mid xasiloon. Laakiin taasi waa sida Akkun u muujiyo jacaylka uu u qabo Nontan. Kani waa majaajillo jacayl dugsiga sare ah oo ku saabsan Akkun iyo Nontan, oo umuuqda inuusan dan ka lahayn sida uu Akkun ula dhaqmayo iyada.
Sheeko Muhiim ah:
In kasta oo uu si xushmad leh u fahmay, Atsuhiro "Akkun" Kagari ayaa soo jiiday gabadha riyadiisii: macaan iyo jacayl aan lahayn Katagiri. Si kastaba ha noqotee, xishoodkiisa ku saabsan ficillada kalgacalka ah - laga bilaabo mahadcelinta illaa is-weydaarsiga dhunkashada - waxay u horseedaa inuu kula dhaqmo Katagiri si xun oo qumman nolol maalmeedkooda. Laakiin Akkun wali aad buu u jecelyahay wiilku; oo wuxuu ku muujiyaa jaceylka uu u qabo Katagiri qaabkiisa. Laga soo bilaabo inuu ku dhaleeceeyo si uu u qaado sawirkeeda si uu u dhageysto sheekooyinkeeda, wuxuu ku dambeeyaa inuu daba galo saaxiibtiis.
Nasiib wanaagse, Katagiri wuxuu u arkaa ficilada Akkun kuwo qurux badan oo kalgacal leh, wuuna ogyahay inuusan dhab ahaan ula jeedin wax caydiisa ah. Xitaa haddii saaxiibkood dhow, Masago Matsuo, uu u arko wax-qabadkooda xoogaa yar, Katagiri wuxuu jecel yahay daalimkeeda macaan sida uu yahay.
Waxaad ka daawan kartaa Macaankeyga Macaan halkan: https://www.crunchyroll.com/my-sweet-tyrant
Waxaad ka akhrisan kartaa dib u eegista 'My Sweet Tyrant' halkan: https://www.crunchyroll.com/my-sweet-tyrant/reviews
Qiimeynta: 4 5 XNUMX.
Liinta - Crunchyroll / Top 10 Jacayl Anime Si Aad U Daawato Crunchyroll
Yuzu, oo ah gyaru dugsi sare oo aan wali la kulmin jacaylkeedii ugu horreeyay, ayaa loo wareejiyay iskuul dhammaan gabdhaha ka dib markii hooyadeed dib u guursato. Aad ayey uga xanaaqsan tahay inayan saaxiib la dhigan karin dugsigeeda cusub. Ka dib, maalinteedii ugu horreysay, waxay sida ugu xun ee ugu macquulsan ula kulantaa madaxweynaha golaha ardayda ee timaha madow madow. Waxaa intaa dheer, waxay gadaal ka ogaatay inay Mei tahay walaasheed cusub ee aabaha ah, oo waxay ku wada noolaan doonaan isla saqafka! Oo sidaasuu jacaylka jacaylka ee u dhexeeya laba geesood oo ka soo horjeeda gabdhaha dugsiga sare oo isu arka inuu midba midka kale jecel yahay ayaa bilaabmaya!
Xilligii xagaaga ee sanadkeedii ugu horreeyay ee dugsiga sare, Yuzu Aihara hooyadeed ayaa guursatay, iyada oo ku qasabtay inay u beddesho dugsi cusub. Bulsho ahaan moodada ah sida Yuzu, dhacdadan aan ku habboonayn waa fursad kale oo lagu kasbado saaxiibo cusub, jacayl ku dhaco, uguna dambayn la kulmo dhunkasho ugu horreysa. Nasiib darrose, riyada Yuzu iyo qaabkeedu isma waafaqsana ugxannideheeda cusub, dhammaan gabdhaha-dugsiga, oo ay ka buuxdo aammusnaan-ku-xirnaansho iyo ka-soo-kabashada darajo-barayaasha. Muuqaalkeeda qurxoon wuxuu maareeyaa inuu soo jiito dareenka Mei Aihara, oo ah madaxweynaha golaha ardayda ee quruxda badan, isla markaana si dhakhso ah ugu dhaqaaqda inuu si macno leh u salaaxo jirka Yuzu isagoo dadaal ugu jira inuu ka qaado telefankeeda gacanta.
Waxaad ka daawan kartaa liinta halkan: https://www.crunchyroll.com/citrus/videos
Waxaad ka akhrisan kartaa dib u eegista Citrus halkan: https://www.crunchyroll.com/citrus/reviews
Chihayafuru - Crunchyroll / Anime 10ka Jacayl ee Ugu Fiican Si Aad U Daawato Crunchyroll
Soo baxayaa 2011 xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee anime this Romance anime waa Chihayafuru kaas oo leh laba xilli oo kale sidoo kale, taas oo ka dhigaysa sheekada ugu dheer ee Jacaylka ee liistadan! Iyada oo aad u tiro badan oo dhacdooyin ah in laga gudbo (in ka badan 70) wax dhibaato ah kuma lahaan doontid maalgashiga tan anime Hubaal.
Chihaya Ayase waxay nolosheeda inteeda badan ku qaadatay inay gacan siiso walaasheed xirfadeeda Model. Markay la kulanto wiil la yiraahdo Arata Wataya, wuxuu u maleynayaa Chihaya inuu awood u leeyahay inuu noqdo ciyaaryahan karuta weyn. Sida Chihaya ay ku riyooneyso inay noqoto ciyaaryahanka ugu wanaagsan Japan ee karuta, waxay si dhaqso ah uga go'day saaxiibadeed ka ciyaara karuta. Haatan waxay ku jirtaa dugsiga sare, Chihaya wali waxay ciyaareysaa karuta iyadoo rajo ka qabta inay mar uun la kulanto saaxiibadeed markale.
Chihaya Ayase, oo ah gabadh xoog leh rabitaanna leh isla markaana xambaarsan Tomboyish, ayaa ku soo koreysa hooska walaasheed ka weyn. Iyada oo aan ku riyoon wax iyada u gaar ah, ayay ku qanacsan tahay qaybteeda nolosha illaa ay la kulanto Arata Wataya. Ardayga bedelka aamusnaanta ah ee fasalkeeda hoose wuxuu u soo bandhigayaa karuta tartanka, ciyaar kaar ahaan jir ahaan iyo maskax ahaanba u baahan dhiirrigelin hiddo-wadaha reer Japan ee Boqol Abwaan.
Waxaa soo jiitay jacaylka Arata ee ciyaarta waxaana ku dhiirrigeliyay suurtagalnimada inuu noqdo kan ugu fiican Japan, Chihaya si dhakhso leh ayuu ula dhacaa adduunka karuta. Iyada oo ay weheliso fannaanka caanka ah ee Arata iyo saaxiibkeed kibirka badan laakiin shaqada badan ee Taichi Mashima, waxay ku biirtay Bulshada Shiranami ee maxalliga ah. Saddexda qof waxay ku qaataan carruurnimadooda carruurnimadooda bilaa idmo ah, illaa ay duruufaha kala kaxeeyaan.
Hadda dugsiga sare, Chihaya wuxuu ku koray karuta freak. Waxay higsaneysaa inay dhisto Naadiga Mizusawa ee Sare ee Tartanka Karuta, iyada oo dejineysa himilooyinkeeda tartanka qaran ee Omi Jingu. Ku midoobida Taichi oo aan dan ka lahayn, riyada Chihaya ee ah in la dhiso koox karuta ah ayaa talaabo kaliya u jirta inay run noqoto: waa inay isu keentaa xubnaha leh hamiga ciyaarta u dhiganta midkeeda.
Waad daawan kartaa Chihayafuru halkan: https://www.crunchyroll.com/en-gb/chihayafuru
Waxaad u aqrin kartaa dib u eegista Chihayafuru halkan: https://www.crunchyroll.com/en-gb/chihayafuru/reviews/helpful/page1
Roll Crunchy Juun 17th, 2021 Qiimeynta:
Magaalada New York, 1928, waxaa jabay shaabaddii u dhexaysay Dunida iyo Naarta. Shisheeyaha hubka muqaddaska ah, dadka caanka ah ee shisheeyaha ka fogeeya Sister Rosette iyo Chrono - waa shaydaan awooddiisa cajiibka ah ay ku dheehan tahay nolosha lammaanahiisa - nadiifinta waddooyinka wasakhda jinka. Tartan ka dhan ah waqtiga, labadan qof ee firfircoon waxay ku eedeeyaan geeri gaar ah inay joojiso argagaxyada apocalyptic ee shaydaanka aan laga adkaan karin, Aion.
1920-yadii waxay ahayd toban sano oo isbedel weyn iyo kacdoon, iyadoo jinniyo bahalnimo ka muuqdaan Ameerika oo dhan. Si loola dagaallamo halistaas, ayaa la aasaasay ururkii muqaddaska ahaa ee loo yaqaan Amarkii Magdalene. Laanta ururka ee New York waxay hoy u tahay gabadha yar yar ee taxaddar la'aanta ah ee Sister Rosette Christopher, iyo waliba lammaanaheeda Chrno. Waxaa loo xilsaaray baabi'inta hanjabaadaha jinka, kooxda caanka ah waxay ku fiican yihiin shaqadooda, in kasta oo ay waxyeello baaxad leh u geysteen howlahooda.
Si kastaba ha noqotee, Rosette iyo Chrno labadaba waxaa wada waxyaalahooda madow. Iyagoo dabar goynaya jiniyada, Rosette waxay rajeyneysaa inay hesho walaalkeed lumay Joshua oo uu qabtay dambiilaha iyo jinka, Aion, oo ay Chrno sidoo kale wadaagaan taariikh dhiig leh Labadoodu waa inay la dagaallamaan khatarta sii kordheysa ee jinka oo ay ogaadaan halka ay ka timaaddo, iyagoo sii wadaya raadinta runta ka dambeysa luminta Joshua.
Waxaad ka daawan kartaa halkan Chrono Crusade: https://www.crunchyroll.com/en-gb/chrono-crusade
Waxaad u aqrin kartaa dib u eegista Chrono Crusade halkan: https://www.crunchyroll.com/en-gb/chrono-crusade/reviews/helpful/page1
4. Jinni Boqor Daimao
Jinni King Daimao - Crunchyroll / Anime 10ka Jacayl ee Ugu Fiican Si Aad U Daawato Crunchyroll
Demon King Daimao wuxuu raacayaa Akuto Sai oo ah astaamaha hogaamiyaha, kaas oo maalinta uu galo Constant Magic Academy, helo natiijo aad u lama filaan ah oo xirfada shaqo tijaabo mustaqbal: "Devil King."
Akuto Sai, waa wiil agoon ah oo raba inuu mar uun noqdo wadaad si uu bulshada wax ugu soo kordhiyo. Nasiib darrose, imtixaankiisii ​​aqooneed ee garaadkiisu wuxuu isaga dhigay inuu yahay Demon King ee soo socda, taas oo ka dhigaysa qof walba oo dugsiga jooga (marka laga reebo in yar oo la xushay) inuu isaga ka baqo. Hada waa inuu maraa tababarkiisa Akadeemiyada Joogtada ah ee 'Constant Magical Academy' iyadoo ay la socdaan dad cabsi darteed u cararaya, gabar cadaalad ah oo isku dayaysa inay disho, "walaal yar" oo ukun keli ku ah iskuulka xanaaqiisa, madax hawleed aan muuqan, mashiinka dila robot, iyo macalin raba inuu maydkiisa waxbarto. Dhamaan astaamahani waxay ku daraan majaajillada anime-ka waxayna ka shaqeeyaan shaqo wanaagsan sidii ay waxyaabaha u xiiso gelin lahaayeen.
Waxaad ka daawan kartaa Jinni King Daimao halkan: https://www.crunchyroll.com/en-gb/demon-king-daimao
Waxaad u aqrin kartaa dib u eegista Jinni King Daimao halkan: https://www.crunchyroll.com/en-gb/demon-king-daimao/reviews/helpful/page1
3. Gabar Reer Ah
Saaxiibka Gudaha - Crunchyroll / Top 10 Jacayl Anime Si Aad U Daawato Crunchyrolll
Waxaan u maleynayaa cinwaanka aad horey u ogtahay halka anime uu u socdo iyo midigtaada. Waxaa jira muuqaallo badan oo galmo ah tan Naadi marka fadlan la soco.
Natsuo Fujii wuxuu jecel yahay macallinkiisa, Hina. Isagoo isku dayaya inuu iloobo dareenkiisa ku wajahan iyada, Natsuo waxay aadeysaa qasacad ay la wadaagaan asxaabtiisa fasalka halkaasoo uu kula kulmayo gabar aan caadi aheyn oo lagu magacaabo Rui Tachibana. Dhacdooyin yaab leh, Rui waxay weydiisatay Natsuo inay si dhuumaaleysi ah kula soo baxdo oo ay wanaag ugu sameyso. Si layaab leh, meesha ay u socdaan waa guriga Rui-codsigeeduna waa inuu u galmoodo iyada. Ma jiro wax jacayl ah oo ka dambeeya ficilka; kaliya waxay rabtaa inay wax ka barato khibrada. Isagoo u maleynaya inay ka caawin karto inuu iska iloobo Hina, Natsuo waxay si cabsi la’aan ah u oggolaatay.
Natsuo Fujii si rajo la’aan ah ayuu jacayl ugu qabaa macallinkiisa, Hina. Isagoo isku dayaya inuu horay u socdo, wuxuu ku raacsan yahay qas a. Halkaas wuxuu kula kulmayaa gabar aan caadi aheyn, Rui Tachibana, oo ku martiqaadaysa inuu si dhuumaaleysi ah ku baxo. Waxay u kaxaysaa gurigeeda waxayna ka codsataa inuu u galmoodo iyada. Natsuo, oo ka xanaaqsan in jacaylkiisu uusan midho dhallin doonin, ayaa lumiyay bikranimadeeda iyada.
Maalinta ku xigta, aabaha Natsuo wuxuu u sheegayaa inuu doonayo inuu dib u guursado oo rafiiqiisa mustaqbalka ayaa imanaya gurigooda fiidkaas. Markuu albaabku furmo, waxaa soo baxday in Rui ay tahay Hina walaasheed ka yar oo labaduba ay yihiin gabdha gabadha aabihiis doonayo inuu guursado, Tsukiko Tachibana.
Waxaad ka daawan kartaa Gabar Saaxiib ah halkan: https://www.crunchyroll.com/en-gb/domestic-girlfriend
Waxaad ka akhrisan kartaa dib u eegista gabadha saaxiibtinimada guriga halkan: https://www.crunchyroll.com/en-gb/domestic-girlfriend/reviews/helpful/page1
2. Waqti Dahabi ah
Waqti Dahabi ah - Crunchyroll / Top 10 Jacayl Anime Si Aad U Daawato Crunchyrolll
Waan jeclahay Waqtiga Dahabiga ah waana mid ka mid ah waxyaabaha aan jeclahay ee wareega ah. Dhamaadku waa wanaagsan yahay, sheekadu waxay leedahay astaamo wanaagsan oo la jeclaan karo isla markaana qorshaha ayaa ah mid aad u fudud in lala socdo. Haddii aad runtii rabto Anime oo leh qalbi jilicsanaanta dareenka markaa fadlan dooro Waqtiga Dahabiga ah, kama qoomameyn doontid.
Banri Tada waa arday dhowaan la dhigey iskuul sharciyeed oo gaar loo leeyahay oo ku yaal Tokyo. Si kastaba ha noqotee, shil dartiis, wuxuu lumiyay dhammaan xusuustiisii. Intii uu ku guda jiray hanuuninta fasalka koowaad, wuxuu la kulmay arday kale oo ay isla iskuulka ka wada yimaadeen, Mitsuo Yanagisawa, oo ay hal mar wada garaaceen. Iyaga oo aan wax is xasuus ahi is lahayn, noloshooda ayaa marba marka ka dambaysa isku sii dhafanaysa sidii ay u dejiyeen gacmo qaddar. Laakiin maxay tahay qaddarkooda, waxayna u horseedi doontaa farxad ama xusuus kale oo la illaawo.
Shil naxdin leh awgood, Banri Tada waxaa ku dhacay amnesia, wuxuu kala diray xusuusti magaaladiisii ​​iyo waayihiisii ​​hore. Si kastaba ha noqotee, ka dib markii uu saaxiib la noqday Mitsuo Yanagisawa, wuxuu go'aansaday inuu horay u sii socdo oo uu nolol cusub ka bilaabo dugsiga sharciga ee Tokyo. Laakiin markii uu bilaabay inuu la qabsado noloshiisa kulleejada, quruxda Kouko Kaga ayaa si muuqata u dhex gashay nolosha Banri, kulankoodana fursad waxay astaan ​​u tahay bilowga sanad lama iloobaan ah.
Kadib markii uu indha indheeyay nolosha kulliyadda, Banri wuxuu bartay inuu joogo meel cusub iyo adduun cusub — meel uu dib uga dhalan karo, ku yeelan karo saaxiibo cusub, jacayl ku dhici karo, khaladaad sameyn karo, kuna kori karo. Oo markuu bilaabo inuu ogaado qofka uu ahaa, dariiqa uu doortay wuxuu u horseedaa nolol indho la'aan indho la'aan ah oo uusan waligiis illoobi doonin.
Waxaad ka daawan kartaa Waqtiga Dahabiga ah halkan: https://www.crunchyroll.com/en-gb/golden-time
Waxaad ka akhrisan kartaa dib u eegista Waqtiga Dahabiga ah halkan: https://www.crunchyroll.com/en-gb/golden-time/reviews/helpful/page1
1. Kaguya-Sama: Jacaylku Waa Dagaal
Waxaan horey u soo bandhignay Kaguya-Sama Love Is War on our Top 10 Gabal Nolol Anime ah oo laga daawan karo Funimation waana sabab macquul ah. Kaguya-Sama waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya ee lagu qiimeeyo Animes on Funimation waana isla kiiskii ka dhacay Crunchyroll. Anime-kani wuxuu umuuqdaa mid runtii caan ah waxaadna ka akhrisan kartaa qodobkeena dib u eegista halkan: https://cradleview.net/is-kaguya-sama-worth-watching/ ama kafiiri boggeena Kaguya-Sama Love Is War: https://cradleview.net/kaguya-sama/
Qeybta sare ee dugsiga sare ee Shuchiin Academy, gudoomiyaha golaha ardayda iyo madaxweyne kuxigeenka, Miyuki Shiragane iyo Kaguya Shinomiya, waxay umuuqdaan lammaanaha ugufiican. Kaguya waa gabadh reer hantiile ah oo hanti wadaage ah, iyo Miyuki waa ardayga ugu sareeya dugsiga lagana yaqaan guud ahaan gobolka. In kasta oo ay isjecelyihiin, haddana waxay aad ugu hanweyn yihiin inay qirtaan jacaylkooda, iyagoo la imanaya qorsheyaal badan oo kan kale looga dhigayo inuu qirasho.
Waxaad ka daawan kartaa Kaguya-Sama Love Is War: https://www.crunchyroll.com/en-gb/kaguya-sama-love-is-war
Halkan ka akhriso faallooyinka Kaguya-Sama: https://www.crunchyroll.com/en-gb/kaguya-sama-love-is-war/reviews/helpful/page1
Akhriso dib-u-eegista dhammaystiran ee Kaguya-Sama iyadoo loo marayo Cradle Eeg halkan: https://cradleview.net/is-kaguya-sama-worth-watching/
Taasi waa taas, waxaan daboolnay dhamaanteen Top 10 Romance Anime Picks oo aad ka daawan karto Crunchyroll hadda. Haddii aad ka heshay maqaalkan fadlan ka tag like iyo share, sidoo kalena faallo. Qoraaga qoraaga: http://en.gravatar.com/lillyj01
Waxa kale oo aad ka taageeri kartaa bogga adoo maraya bixinta ama taageerida Patreon. Waxa kale oo aad ku caawin kartaa adiga oo iibsanaya qaar ka mid ah alaabada rasmiga ah ee 'Cradle View' ee hoos ku taal. Dhamaan nashqadaha asalka ah iyo kuwa gaarka ah MA HELI KARTID meel kale.
Gelitaan Hore Jinni dilaa - Meesha laga iibsado meheradda ugu fiican
Gelitaanka Xiga Waa Kuma Marwo Puiyi Mar Kale? - Model-ka Super-ka ah ee 'Viral Super Model' oo Noqday Xiddig Caalami ah Instagram-ka Caalamka